Sendikà · Aogositra, 2010 · Global Voices teny Malagasy
Sendikà · Aogositra, 2010
Tantara mikasika ny Sendikà tamin'ny Aogositra, 2010
Chili: Mbola velona ireo mpitrandraka 33 tafahitsoka
Amerika Latina27 Aogositra 2010
Mpitrandraka 33 tafahitsoka ao amina fitrandrahana varahina sy volamena nirodana any Chili avaratra no nanamafy tamin'ny alalan'ny hafatra fa velona avokoa izy rehetra ao amin'ny fialofana, sady mihamafy ireo fikarohana sy ezaka fanavotana raha saika very ny fanantenana ny hahita azy ireo velona. Ilay hafatra dia tafiakatra taty ivelany tao...
Etazonia: Miblaogy momba ny fandaharam-pianarana “Asa sy Fitetezam-paritra” ireo mpianatra miteny Rosiana
Amerika Avaratra27 Aogositra 2010
Isaky ny faharavatra, an'arivony ireo mpianatry ny kolejy avy any Rosia, Ukraine ary ireo firenena hafa Soviety taloha no tonga any Etazonia mba handray anjara amin'ny fandaharam-pianaranan'i Etazonia momba ny Asa sy Fitetezan-tany [EN]. Maro ireo manoratra blaogy momba ireo zava-niainany sy ireo heviny.
Japana: toerana izay tsy ekena mihitsy ny fialan-tsasatra
Azia Atsinanana16 Aogositra 2010
Mitsotsotra malaindaina eo ambanin'ny alokaloky ny elo eny amoron-dranomasina, ho mpizahantany ary hitsangatsangana manodidina ireo lalàn'ny tanàna mbola tsy fantatra miaraka amin'ny boky mpitari-dalana eny an-tanana, na tsotra fotsiny koa hoe mala aina ao an-trano manararaotra ny fotoana malalaka . Toa safidy tsy misy dikany ireo ho an'ireo mpiala sasatra...
Maraoka: Fihaviana sy Fanavakavaham-bolon-koditra
Afrika Avaratra sy Afovoany Atsinanana06 Aogositra 2010
Maraoka, fihaonan-dalan'ny tontolo Atsinanana sy Andrefana, ny tontolo Eoropa sy ny tontolo Arabo hatry ny ela dia firenena ahitana fahasamihafana amin'ny lafiny maro, ary mihoatra noho izany aza, mahazaka ny tsy fitoviana amin'ny lafiny maro ny Maraokana. Amin'ny lafiny hafa, tahaka ny nosoratan'i Smahane Bouyahia indray anefa dia hitan'ireo vahiny ho...
Amerika Avaratra06 Aogositra 2010
Amin'ity fahavaratra ity, mpianatra valo sy mpikambana ao amin'ny sampana mianatra ny Fifehezana ny Fitantanam-bahoaka (MPA) ao amin'ny Anjerimanontolon'ny Kentuky Avaratra (NKU) any Kentucky any Etazonia no mamarana fiofanana any Bangladesh ao amin'ny Banky Grameen. Nanao fitsidihana maro tany izy ireo ary mandrakitra ireo zava-niainany any amin'ny blaoginy tsirairay avy...
Qatar: Manontany izay tetikasa amin'ny hoavy ireo miasa ivelan'ny tanindrazana
Afrika Avaratra sy Afovoany Atsinanana02 Aogositra 2010
Raha mponina efa ela tany amin'ny iray amin'ireo firenen'ny GCC ianao, inona ireo tetikasa maharitra anananao? Inona no hataonao rehefa tafaverina an-tanindrazana? Ao amin'ny Qatar Living, miezaka mamaly ny fanontaniana tsy azo idifiana ireo niala ny tanindrazany: Inona no hataony rehetra miverina an-tanindrazana izy ireo?